Igumbi elinomtsalane le-85sqm / ifama / Ihlathi laseBavaria - I-Airbnb
Igumbi elinomtsalane le-85sqm / ifama / Ihlathi laseBavaria
Treffelstein, Bayern, Germany
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMonika
Igumbi elinomtsalane le-85sqm retro kwindlu yeendwendwe ezithandekayo ngqo kwifama.
Enye indawo yokuhlala kwisitayile se-maisonette iyafumaneka.
Nabani na okhetha ukunyaniseka kunye negadi yasendle kwimfezeko yanamhlanje uya kuziva esekhaya nathi!
#Ubutsha behlobo #VillaKunterbunt #wilderGarten #Oasis #Ukubaleka malunga ne#Animals
# LargeGroups #Children #Family holiday #Holiday kwifama # Kufuphi nechibi # Indawo yeBarbecue #FreudeanImprovistaion #UkuHamba # Iihambo #Kufuphi nomda #Indawo enye #Gastwirtschaft
... kunye nothando oluninzi
I "Gasthaus zum Zollhaus" eneneni yindlu yakudala yamasiko, eyandiswe ngootatomkhulu nootatomkhulu bam kwiminyaka yoo-70 ukuya kwindlu yeendwendwe abathi, ukongeza kulimo lwabo, babalekele ngomdla "iindwendwe zasehlotyeni zaseJamani" amashumi eminyaka. Ukuze ndigcine indlu yamasiko, ndagqiba ekubeni "ndibaleke kwisixeko" ngokwam kwiminyaka embalwa edlulileyo. Nangona yonke into ikwinkqubo yokwakhiwa kwakhona kwaye ihlaziywe, ndijonge phambili ekugqibeleni ndivule iingcango kwiindwendwe ezintsha kwakhona.
Ngenxa yale njongo, siguqule amabini kumagumbi angaphambili endlu yeendwendwe aba ngamakhitshi kumgangatho wokuqala, ukuze omabini amaphiko asetyenziswe ngokwahlukeneyo njengezindlu zeeholide. Ezi nganye zijikeleze i-85 square metres kwaye zibonelela ngeebhedi ukuya kwiindwendwe ezisixhenxe (amagumbi amathathu aphindwe kabini - amabini anegumbi lokuhlambela kwigumbi / elinye elinegumbi lokuhlambela epasejini). Kukwakho nenketho yokubhukisha amagumbi ama-3 kumgangatho wesibini (amagumbi amabini aphindwe kabini / igumbi elinye eli-1) kumaqela amakhulu (ngentlawulo eyongezelelweyo). Ngexesha lokulungiswa, kwakubalulekile kum ukuba ndigcine isimilo sokuqala samagumbi kangangoko kunokwenzeka, yiyo loo nto sisamkela ngokukhethekileyo abathandi abaxabisa ubunyani be-rustic ngaphezu kokugqibelela kwale mihla.
Amaqela ethu kunye neendwendwe nazo ziyakwazi ukusebenzisa i-inn endala, e-rustic kumgangatho ophantsi njengendawo yokuphumla, eyayihlala ixakeke ukusuka kusasa ukuya ngokuhlwa. Sikwayavuya ukunika iziselo apha ngesicelo.
Indlu yethu yeendwendwe enentendelezo edibeneyo ikwindawo entle, engasese, kanye ngasehlathini. Egadini unokuseta (ezikhoyo) iilounger, iiparasols, amaqela okuhlala okanye iihammocks. Indawo yokosa inyama iyafumaneka kwaye indawo yethu yokudlala isakhiwa kwakhona.
Kubantwana kukho iibhokhwe, iinkukhu, iinkomo, amathole kunye nemivundla yokubukela nokutyisa. Zonke iindwendwe zam zamkelekile, ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, ukuzibonelela ngeevithamini kwimithi yethu yeziqhamo (cherry, iplamu, iplam, apile, pear). Ukutya kwasekuseni ungafumana ubisi olutsha kum etafileni. Amaqanda kunye neejam zasekhaya zingathengwa ukuba ziyafuneka. Ukongeza, ndikulungiselele urhatya lwebarbecue ngeesaladi, iziselo kunye neemveliso zenyama ezisuka kwibhula yendawo.
Ngokusisiseko unokufumana yonke into kum, ngaphandle kwelinen yebhedi ene-ayine! Ihlanjwe ngothando kwaye yomiswe elangeni, kodwa uku-ayina ayisenanto yakwenza :)
Ukusuka kwifama yethu kukho amathuba amaninzi okuya kuhambo kunye nokuqalisa imisebenzi. Ngaphandle kokuhambahamba kwihlathi elimelene ngokuthe ngqo, ziikhilomitha nje ezimbalwa ukusuka kwiRiphabliki yaseCzech; Imizuzu emihlanu xa uhamba ngemoto yiSilbersee, enendawo ehlala abantwana elwandle. Abo baqhubela eWaldmünchen (imizuzu eyi-10 ngemoto) banokuyonwabela i-lido kwiPerlsee enkulu. I-Cherchov (i-15min drive) kunye noHohe Bogen kunye ne-toboggan run ehlobo (55min drive) bakumema ukuba uhambe. Kwiidolophu ezincinci ezijikelezayo (malunga nemizuzu eyi-10) uya kufumana zonke iivenkile (i-Norma / Netto / Edeka / Tedi / i-candle factory / ikhemesti / njl.), iikhefi kunye ne-ice cream parlor. Iilali ezimbini ezilandelayo ezingqongileyo (imizuzu emi-5 nganye yokuqhuba) zikwabonelela ngeevenkile ezikwikona, ababhaki, iibhula kunye neeresityu.
Ekuqaleni ndakhulela nabazali bam eLake Chiemsee. Ukugqiba kwam kwisikolo samabanga aphakamileyo, ndahlala eItali iminyaka esixhenxe, apho ndafunda ibhayoloji ndigxininisa kwimfuza. Oku kwalandelwa yiminyaka embalwa njengesazi ngebhayoloji eBerlin. Xa ikhaya likatatomkhulu-i-"Gasthof zum Zollhaus" - lisongela ukuphela ngenxa yokungabikho komdla kuyo yonke inzala, ndagqiba ekubeni ndijike isixeko kwaye ndigcine impahla yentsapho. Namhlanje ndiqhuba ifama njengomfama osisigxina kwaye andikazisoli ngesi sigqibo ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa nokuba andi (okwangoku) ndiphoswe kukuhamba, iya kuba yinto yam ndedwa kancinci kancinci kwindawo yam eyimfihlo. Yiyo loo nto ndivuya ngakumbi ukuba ekugqibeleni sinokuvula iingcango zeendwendwe ezintsha kwakhona.
Ndiyathemba ukuba ndikwazile ukubonakalisa kancinci indlela eziva ngayo ngathi, kwiVilla Kunterbunt yam. Kwaye ukuba unayo nayiphi na imibuzo, musa ukuthandabuza ukubuza.
Ndijonge phambili ekuphenduleni.
Kwaye ndikhangele phambili kuni!
Kude kube ngoko, kunye nathi kwindlu yamasiko.
Kakade ke, sikufutshane kakhulu nehlathi kunye nomda weCzech. Ngeemfuno zemihla ngemihla, ngokuqinisekileyo ndicebisa iidolophu zethu ezincinci eziseTreffelstein naseTiefenbach. Ungadla kakuhle kwi-inn kwikona yaseJamani, ngaphakathi komgama wokuhamba ngemizuzu embalwa.
Nach langem Weltenbummeln habe ich mich hier auf diesem Fleckchen Erde sesshaft gemacht und versuche hier langsam einen schönen Ort aufzubauen, den ich gerne mit netten Leuten teilen möchte! Ich habe zwar immer viel zu tun- aber freue mich auch dann und wann auf ein Feierabend-Zusammensein. Wer die Ruhe sucht ist hier gerade richtig!
Nach langem Weltenbummeln habe ich mich hier auf diesem Fleckchen Erde sesshaft gemacht und versuche hier langsam einen schönen Ort aufzubauen, den ich gerne mit netten Leuten teil…
Ndiqhuba ifama njengomfama osisigxina. Xa ndingekho phandle kwaye ndihamba ngetrektara yam, ndingasoloko ndifumaneka kwindawo ethile kwindawo ngemibuzo. Ndiyavuya ukuhlala phantsi neendwendwe zam emva komsebenzi sitshintshiselane ngezimvo.